Haalli Daangaa Itiyoophiyaa Sodaachisoo Keessa Jira
Yunaayitid Isteetis haalawwan tokkooma daangaa Itiyoophiyaaf sodaachisoo tahan ilaalchisee yaaddoo hidda gad-fageeffataa deeme qabdi. Haalawwan sodaachisoo tahan keessaa tokko rakkoo amma naannoo Tigiraay keessatti mul’ataa jiru.
Uummatni Tigiraay keessaa dhiittaalee mirga namoomaa ciccimoo jalatti gidirfamuun itti fufee jira. Uummatni miliyoona tokkoo ol tahuu wabii nyaataa hin qabu. Yeroo akkanaatti, gargaarsi namoomaa hatattamaan achitti barbaachisu, humnoota waraanaa Itiyoophiyaa fi Ertiraa akkasumas humnoota hidhatan birootiin danqamaa jira.
“Yunaayitid Isteetis ajjeechaalee, humnaan buqqisuu, hookkara saalaa malaan geggeessamu, dhiittaalee mirga dhala-namaa fi miidhaalee raaw’ataman,” cimsitee balaaleffatti, jedhan Ministiriin Dhimma-alaa Yunaayitid Isteetis, Antonii Bilinken ibsa isaanii keessatti.
“Maddeen bishaanii, hospitaalotaa fi manneen eegumsa fayyaa dabalatee barbadeessamuu qabeenyaalee uummata siivilii Tigiraay keessatti geggeessamaa jiruttis akkasuma baay’ee rifanne,” jedhan, Ministarichi dhimma alaa Bilinken. M
ootummaan Itiyoophiyaa kanneen dhiittaalee mirga namoomaa geggeessan akka itti gaafataman akka taasisu, siiviloota irraa miidhaa akka ittisuu fi gargaarsi namoomaa danqaa malee akka dhaqqabu akka mirkaneessu, Yunaayitid Isteetis waamicha dhiheessiti.
“Haasaan dippiloomaasummaa sona-qabeessi geggeessameyyuu, qaamonni lola Tigiraay sana keessa jiran, hookkaricha dhaabuuf yokaan rakkoo siyaasaa mudate sanatti karaa nagaa furmaata barbaaduuf, tarkaanfiin qabatamaan fudhatan hin jiru,” jedhan, Ministarichi Dhimma-alaa Yunaayitid Isteetis, Bilinken.
Ministarichi Biliknen mootummaan Ertiraa waraana biyyattii gara daanga Ertiraa sadarkaa Addunyaatti beekkannaa qabuutti akka hatattamaan deebisu waamicha dhiheessan.
Waraansi dhaabatee, gargaarsa namomaaf karaan bal’aan yoo hin banamne, hanqinni nyaataa yeroo ammaa Tigiraay keessatti mul’atu gara oola yokaan beelaatti deemuu mala.
Haala hamaa Itiyoophiyaa keessatti mul’atu kana irraa kan ka’e, ministarri dhimma-alaa Bilinken aangawoota Itiyoophiyaa fi Ertiraa kanneen ammaa fi kanneen duraanii, miseensota humnoota naga-eegumsaa, namoota humna naannoo Amaaraa fi humna ka sirnaa hin tahiinii naannicha keessaa akkasumas miseensota Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay rakkoon Tigiraay keessaa sun akka furmaata hin arganne danquutti itti gaafaman yokaan hidhata sanaa qaban irra akka uggurri viizaa kaa’amu labsan.
Kanneen uummata Tigiraay irratti miidhaa raaw’atan, akkasumas kanneen akka gargaarsi namoomaa hin dhaqqabne dhorkanis uggurri kun ni ilaallata. Miseensonni maatii namoota akkanaas ugguricha jala galuu malan. Ministarichi dhimma-alaa Bilinken, mootummoonni biroonis tarkaanfiilee akkanaa fudhachuu irratti akka isaan waliin hiriiran waamicha dhiheessan.
Kana malees, Yunaayitid Isteetis, dabalataan gargaarsa gama dinagdee fi naga-eegumsaan Itiyoophiyaaf kennitu bal’inaan daangessitee jirti. “Gargaarsa namoomaa fi gargaarsawwan barbaachisoo haga tokko Ityoophiaaf kenninu garuu itti fufna,” jechuun kan ibsan, ministarichi Bilinken, Gargaarsa Ertiraa irra uggurawwan bal’inaan kaa’amanii jiran akkuma jiranitti itti fufu, jedhan. Yunaayitid Isteetis rakkoo Tigiraay keessaa furuuf carraaqqii godhamuu fi lammiwwan Itiyoophiyaa akka araaraa fi waliin-marii tarkaanfachiisan gargaaruutti cichitee jirti – jechuudhaan, Gulaalaan har’aa ibsa isaa xumura.